Mangatsiatsiaka miaraka amin'ireo famoahana Chudder Shudder ireo amin'ny Jolay 2021
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Mangatsiatsiaka miaraka amin'ireo famoahana Chudder Shudder ireo amin'ny Jolay 2021
Vaovao Mahafaly Fialam-bolySarimihetsika mahatsiravinaShudder (sarimihetsika)Streaming MovieTranofiara (sarimihetsika)
by Waylon Jordan Jona 23, 2021
Tapitra tokoa ve ny taona ?! Shudder dia nandatsaka ny fandaharam-pamoahana ny volana Jolay ka heveriko fa izany, saingy toa tsy azo atao izany! Na izany aza, ny sehatra streaming rehetra mampihorohoro / mampihetsi-po dia misy fifangaroana lohateny taloha sy vaovao hanampiana anao hamakivaky ny dolara fahavaratra. Avadiho toy izany ny A / C, atsipazo ny jiro ary raiso ny zava-tsoa mampitebiteby anao!
Inona ny momba an'i Shudder amin'ny Jolay?
Manhunter: Niverina tamin'ny asa aman-draharaha ilay profilera FBI teo aloha, Will Graham, hanenjika ilay mpamono olona serial tsy fantatra anarana antsoina hoe "the Tooth Fairy" avy amin'ny media. Ny sarimihetsika dia misy an'i Brian Cox amin'ny maha Dr. Hannibal Lecter amin'ity fampifanarahana voalohany an'ny Red Dragon nataon'i Thomas Harris.
Near Dark: Kathryn Bigelow dia nitazona ity sarimihetsika maizina nahatalanjona ity momba ny zanaky ny tantsaha kely iray izay niditra an-tsokosoko tamina vondrona vampira mandehandeha rehefa voakaikitry ny drifter tsara tarehy izy.
Sorona may: Fianakaviana iray mifindra any amin'ny tranobe tranainy iray any ambanivohitra izay toa manana hery miafina sy mahatsiravina amin'ireo mponina vaovao. Kintana Karen Black miaraka amin'i Bette Davis, Oliver Reed, ary Burgess Meredith.
Fampisehoana mampihetsi-po: Anthology izay milaza tantara dimy mampatahotra nahazo aingam-panahy avy amin'ny boky tantara an-tsary mampihorohoro an'ny EC
Matoatoa telo ambin'ny folo: Rehefa maty i Cyrus Kriticos, mpanangom-bokatra miavaka amin'ny zavatra tsy manam-paharoa, dia natolony ny zanak'anabaviny sy ny fianakaviany. Mandritra ny anatiny dia hitany fa tsy irery izy ireo.
Ilay zazavavy kely izay miala amin'ny lalan-kely: Rynn Jacobs (Jodie Foster) 13 taona dia monina irery ao amin'ny tanàna kely kilasy Quebec, saingy tsy fantatry ny mpiara-monina, manana fiainana miafina sy mampidi-doza izy rehefa nampahafantarina an'i Frank Hallet (Martin Sheen).
Fiaran-dalamby fampihorohoroana: Telo taona taorian'ny fivadibadihan-doha be, dia lasibatry ny mpamono misaron-tava tamin'ny fetin'ny Taom-baovao ambony sambo mihetsika ireo mpianatra enina eny amin'ny oniversite tompon'andraikitra.
Sambo Fahafatesana: Ondrilahy mpiambina hafahafa miafina ary milentika amin'ny sambo fitsangantsanganana maoderina izay tafita velona amin'ireo mpandeha an-tsambo ary nahita fa sambo fampijaliana nazia tamin'ny Ady lehibe II.
Pledge Night: Ny fianakavian'ny mpianatry ny oniversite iray eo afovoan'ny fanagadrana ny fampanantenany vaovao mandritra ny “herinandron'ny helo” dia niharan'ny fahatezeran'ny olona iray efa ela maty izay maty nandritra ny fahaverezan'ny hazy lasa 20 taona lasa izay.
Famonoana trano tao Sorority: Ilay mpianatry ny oniversite Beth sy ireo rahavaviny sorority dia notafihan'ny mpamono psychopathic iray nandositra izay
mizara rohy telepatik hafahafa aminy.
Andron'ny maty: Satria tototry ny zombies izao tontolo izao, vondrona mpahay siansa vitsivitsy sy mpiasa miaramila monina ao anaty bunker ambanin'ny tany any Florida no tokony hamaritra raha tokony hampianatra, hanafoana, na handositra ny andiam-bato tsy maty izy ireo.
Horsehead: Hatramin'ny fahazazany i Jessica dia nenjehin'ny nofy ratsy miverimberina izay tsy azony, ary niharatsy izy ireo taorian'ny nandevenana ny renibeny. Rehefa niverina tany an-tranon'ny fianakaviany izy ary narary dia nahita ny renibeny maty tao anaty nofy ratsy. Mikaroka ny nofy ratsy nataony tamin'ny alàlan'ny nofinofy mangina hamotopotorana ny zava-miafina manohina ny tranon'ny fianakaviany.
Zanaka: FAMPISEHOAN-TSAINA ORIGINAL FILM. Ao amin'ny Son, rehefa avy niditra an-tsokosoko tao an-tranon'i Laura ny vondrona miafina ary nanandrana naka an-keriny ny zanany lahy valo taona, David, dia nitsoaka tanàna izy roa lahy mba hitady fiarovana. Saingy fotoana fohy taorian'ny fakana an-keriny tsy nahomby dia narary mafy i David, nijaly noho ny fitomboan'ny psychosis sy ny fikorontanana. Taorian'ny fihetseham-pony tamin'ny reny dia nanao zavatra tsy hay lazaina i Laura mba hitazomana azy ho velona, ​​nefa tsy ho ela dia tsy maintsy manapa-kevitra izy hoe hatraiza ny fahavononany handeha hamonjy ny zanany lahy. Andi Matichak (Halloween), Emile Hirsch (Ny Autopsy an'ny Jane Doe), ary kintana Luke David Blumm (The King of Staten Island). (Hita ao amin'ny Shudder Us, Shudder UK, Shudder Canada, ary Shudder AZN)
Mesiasin'ny ratsy: Tovovavy iray no mitady ny rainy artista tsy hita. Ny diany dia nitondra azy nankany amin'ny tanàna amoron-dranomasina Kalifornia hafahafa notendren'ny antokom-pivavahana tsy maty maty.
Fetin'ny fanahy: Taorian'ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina, nanjary nanintona karnavaly nafenina tsy fantatra ny vehivavy.
Piranha: Rehefa navotsitra tsy nahy tany amin'ny reniranon'ny toeram-pialan-tsasatra ny piranhas mpihinan-kena, dia lasa sakafo ho azy ireo vahiny.
Straight Edge Kegger: Ankizy punk iray sy mpimamo be dia be no mifanandrina amin'ny andian-jatovo mpiady mahery
White Girl: Toa very i Beth, zazavavy fotsy dimy ambin'ny folo taona. Nandritra ny takariva iray teny amin'ny arabe atsinanan'i Londres, nivadika maizina ny fifandraisany tamin'ny mponina tao an-tanàna, fa iza no tena monstera?
Separation: Zazavavy kely iray no mahita fampiononana ao amin'ny rainy mpanakanto sy ny fanahin'ny reniny efa maty.
The Call: Horonantsary EXCLUSIVE MAHATONGA. Mpinamana efatra. Antso an-telefaona iray. 60 segondra hijanonana ho velona. Tamin'ny fararanon'ny 1987 dia tsy maintsy tafavoaka velona tamin'ny alina tao an-tranon'ny mpivady mpanota ny vondronà namana kely iray tanàna taorian'ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina. Tsy mila manao antso an-tariby tokana fotsiny, toa mahazatra ny fangatahana mandra-pahatsapan'izy ireo fa afaka manova ny fiainany io antso io… na mamarana azy. Ity asa tsotra ity dia mihodina haingana ho amin'ny fampihorohoroana satria lasa nofinofy ny nofy ratsy indrindra. Ny sarimihetsika dia kintana Lin Shaye sy Tobin Bell. (Hita ao amin'ny Shudder US sy Shudder Canada)
Everly: Fihetsiketsehana / fientanam-po mifototra amin'ny vehivavy nalaina ankeriny izay niatrika mpanenjika olona nalefan'ny lehiben'ny vahoaka romotra / nisambotra azy teo am-piezahana hiaro ny fianakaviany tamin'ny fahatezerany.
Alergika amin'ny saka izy: Mpiasa alika manirery mitady fitiavana fa ny tena filany dia ny manao sary an-tsary hafahafa izay tsy azon'ny olona.
Eto no tonga ny helo: Fety fisakafoanana tamin'ny 1930 nidina tany amin'ny famonoana olona, ​​fivontosana ary fananan'ny demonia tao amin'ny Here Comes Hell, hatsikana mampihoron-koditra mifanehitra amin'ny karazana.
milisy: Rehefa avy novonoin'ny jiolahimboto ny vady aman-janany ary napetraky ny rafi-pitsarana mpanao heloka bevava miverina eny an-dalambe ireo nahavanon-doza, nivadika ho mailo ny mpiasan'ny orinasa iray ao New York mba hitady fepetra ara-pitsarana mihosin-dra.
Hysteria faobe: Vondron'ireo mpamorona mpamosavy mpamosavy Salem no mahita fa eo afovoan'ny hazaza maoderina.
lo: Mpianatra grad iray misaraka amin'ny olon-tiany mba hifantoka amin'ny thesis, tsy tsapany fa nisy voa iray taminy ary hanimba ny fiainany izy.
Kandisha: FAMPISEHOAN-DRAFITRA ORIGINAL FILM. Fotoanan'ny fahavaratra izao ary ny namana akaiky indrindra Amélie, Bintou ary Morjana dia miara-miasa amin'ireo zatovo hafa manodidina. Isaky ny alina dia faly ry zareo mizara tantara mampatahotra sy angano an-drenivohitra. Saingy rehefa notafihin'ny sakaizany taloha i Amélie dia tadidiny ny tantaran'i Kandisha, demonia mahery sy mpamaly faty. Natahotra sy sosotra i Amélie niantso azy. Ny ampitson'io dia hita faty ny vadiny taloha. Marina ny angano ary efa eo am-pamonoana olona izao i Kandisha - ary anjaran'izy telo vavy no manapaka ny ozona. (Hita ao amin'ny Shudder US, Shudder Canada, Shudder UK, ary Shudder ANZ)
Etheria: Ny andiany: Manomboka amin'ny tandrefana aorian'ny apokaliptika ka hatrany amin'ny hatsikana mihoampampana ka hatrany amin'ny horohoro sy horohoro mahatsiravina, Etheria manolotra ny fifangaroana tonga lafatra amin'ny fampiononana ny saina sy ny fikorontanana avy amin'ireo talen'ny karazana vehivavy misongadina indrindra eto an-tany. Ny fizarana tsirairay dia mampiseho ny fahitana ny mahafinaritra amin'ity andiany antolojia vaovao noforonina ity mba hampahafantarana ireo talenta mahavariana amin'ireo mpankafy karazana.
Mijanona izy ireo: Ny mpahay siansa roa izay mizara tantaram-pitiavana iray dia notendrena amin'ny famotopotorana ny fihetsika tsy voajanahary amin'ny biby ao amin'ny tranokalan'ny fiankohonana iray karazana Manson Family.
Der Bunker: Ny mpianatra tanora iray dia mitady mangina sy mitokana mba hifantoka amin'ny asa iray manan-danja nefa tonga mpampianatra ho an'ny zazalahy tsy manam-paharoa iray izay ampianarin'ny ray aman-dreniny any an-trano any amin'ny trano bunker mitokana.
fitsaohana: Paul 12 taona dia nihaona tamina tovovavy marary iray, Gloria, tany amin'ny hopitaly mpitsabo aretin-tsaina manokana tany anaty ala izay niasan'ny reniny ary vetivety dia sosotra taminy. Nandresy lahatra azy izy mba hanampy azy handositra ny hopitaly fa rehefa mandeha izy ireo dia manomboka miseho ny tsy fahitan-doza mampidi-doza an'i Gloria.
Ilay zazalahy ao ambadiky ny varavarana: Alina fampihorohoroana tsy ampoizina no miandry an'i Bobby, roa ambin'ny folo taona sy ny sakaizany, Kevin, rehefa nalaina ankeriny izy ireo rehefa nody avy nianatra. Nahavita nitsoaka ny fetrany i Bobby, nitety ireo efitrano maizina, nivavaka ny fanatrehany fa tsy voamarika izany rehefa nialany ilay nisambotra azy isaky ny avy. Mbola ratsy kokoa aza ny fahatongavanà olon-tsy fantatra iray hafa, izay ny filany mistery miaraka amin'ilay mpaka ankeriny dia mety hitera-doza an'i Kevin. Tsy mila miantso vonjy sy any amin'ny tany maizimaizina kilometatra amin'ny lafiny rehetra i Bobby, niroso tamin'ny iraka famonjena, tapa-kevitra ny hamoaka ny ainy sy i Kevin… na ho faty eo am-panandramana.
fitsaohanaSorona mayFetin'ny fanahyFampisehoana mampihetsi-poandron'ny matySambo FahafatesanaDer BunkerEtheriaEverlyEto no tonga ny heloHorseheadJolay 2021KandishaManhunterHysteria faobeMesiasin'ny ratsyNear DarkPiranhaFianianana NIIMEmenaSeparationAlergika amin'ny saka izymangovitraZanakaFamonoana trano tao SororityStraight Edge KeggerIlay zazalahy ao ambadiky ny varavaranaThe CallIlay zazavavy kely izay miala amin'ny lalan-kelyMijanona izy ireoMatoatoa telo ambin'ny folomilisyWaylon JordanWhite Girl
FANJAKANA: Universal Drops mangatsiatsiaka ny sarimihetsika 'Candyman' vaovao sy ny afisy
Ny tranofiara 'tantara mampihoron-koditra amerikana' dia manolotra ampondra mahatsiravina, sary an-tsaina mifehy
Browse Cateories Select Category Amazon (sarimihetsika) (7) Amazon (andiany) (11) AppleTV + (4) Blu Rays (8) Horohoro amin'ny hatsikana (48) Tantara an-tsary (13) Zavatra tsara hividianana (4) Facebook (andiany) (1) Angano (43) Rakitra hita (28) Gore (24) HBO (sarimihetsika) (6) HBO (andiany) (7) Boky mahatsiravina (58) Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (10,780) Sarimihetsika mahatsiravina (318) Horror Series (83) Subgenres mahatsiravina (10) Hulu (andiany) (5) Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (38) Resadresaka nifanaovana (andiany) (4) Horohoro LGBTQ (42) Lisitry (sarimihetsika) (38) Lisitry (andiany) (2) Tsena (19) Monster Horror (9) Hevitra momba ny sarimihetsika (55) Sarimihetsika (14) Mozika (36) Netflix (sarimihetsika) (29) Netflix (andiany) (32) Tsy angano (4) Paranormal (75) Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (52) Famerenana andian-dahatsoratra (9) Shudder (sarimihetsika) (46) Shudder (andiany) (15) Slasher (4) Hafahafa sy tsy mahazatra (36) Sarimihetsika mivantana (78) Streaming Series (37) Kilalao (2) Tranofiara (sarimihetsika) (236) Tranofiara (andiany) (45) Heloka tena izy (46) Lalao video (181) YouTube (sarimihetsika) (3) YouTube (andiany) (11)
Steve Martin sy Martin Short Star ao Whodunit, ...
Ny trailer Ghostbusters: Afterlife 'dia nanome anay ny zava-drehetra ...
Tonga ny volana septambra izao ny 'Creepshow' Season 3